Zimbabwe - Controversial Today on 2019-04-05
5 Zimbabwe controversial articles found on 2019-04-05.
In Zimbabwe, humanitarian partners and the Government today launched a revised flash appeal for Zimbabwe, seeking $60 million to respond to the needs of 270,000 people affected by floods following the cyclone. ..…
Zimbabwe Republic Police officers intentionally shot three teargas canisters into the offices of Harare and then barricaded the doors preventing staff from exiting... MISA Zimbabwe publishes 2018 State of the Media report. MISA Zimbabwe's published 2018 State of the Media..…
It began with unions in Sudan and Zimbabwe putting old and new authoritarian regimes respectively to the test. ... Last year’s protests against corruption in Zimbabwe escalated to a massive protest against fuel price hikes this January in which over 600 were detained and 12 killed. ..…
Speaking to Zimbabwe Independent this week, EU to Zimbabwe, Timo Olkkonen, said the call for tangible political reforms was at the top of the agenda when Vervaeke met officials from the ministries of Foreign Affairs and Justice... ... EU says Vervaeke's visit was indication of the..…